St. Kitts & Nevis: Eo Am-Panoherana ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2013 18:41 GMT
Tsy fahita firy ao amin'ny politika any Karaiba, izay masiaka ny firaiketam-po amin'antoko, saingy tafakatra avo kosa ny fifanenjanana politika ao St. Kitts and Nevis taorian'ny fialan'ny minisitra zokiolona roa tamin'ny Antokon'ny Mpiasa St. Kitts and Nevis mitondra amin'izao fotoana izao izay misy ny Praiminisitra Denzil Douglas.
Izany fihetsika izany dia nametraka ny governemanta ho ao amin'ny toeran'ny vitsy an'isa ao amin'ny Antenimieran'ny firenena ary nihoatra ny enimbolana izao no tsy nikabary tao amin'ny Parlemanta ny Praiminisitra, izay heverina fa ny anton'izany dia ny mba hidifiana amin'ny fandatsaham-batom-pitsipaha-pitokisana. Mandritra izany fotoana izany ireo minisitra roa, i Timothy Harris sy i Sam Condor, dia nanangana antoko politika hiarahan'izy ireo, dia ny Antokon'ny Mpiasa an'ny Vahoaka.
Tamin'ny herinandro, nitarika diabem-panoherana namakivaky ny renivohitra hanerena ny Praiminisitra hanao fifidianana na hiala hananganana ny governemantan'ny firaisam-[pirenena] ny mpanohitra ao amin'ny People's Action Movement.
Notazonin'ny polisy tamin'ny voalohany ny fahazoan-dalana hanao ilay diabe fa navela ihany ora vitsivitsy mialoha ny hetsika. Talohan'ny diabe, dia nisy fihetsiketsehana kelikely kokoa nitranga, saingy somary mahavariana, fa bilaogy iray ihany – avy any Barbados – no nahamarika izany. Voatatitra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosaina nialoha ny namoahana ny fahazoan-dalana, ny namelabelaran'ny mpitarika ny mpanohitra ny antony hanaovana ny diabe sy ny hanohizana ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta:
Maro ny fanehoan-kevitra momba ny diabe ao amin'ny pejy facebook-n'ireo antoko nandray anjara. Ao amin'ny pejin'ny People's Action Movement , Jacqueline Elliot mahatsapa fa tsy ampy ilay diabe:
Caribbean Queen, kosa mifanohitra amin'izany, mieritreritra fa mety ho fanombohan-javatra goavana ny diabe:
Rita Jarvis Pondt nampanàko ireo fihetsehampo ireo:
Ny sary amin'ity lahatsoratra ity dia avy amin'i Macclure Taylor, nahazoana alalana, hatsarapon'ny Pejy Facebook People's Action Movement.